चिनियाँ अभियुक्तले उब्जाएको प्रश्न : नेपाली बैंकका एटीएम कति सुरक्षित ? | Ratopati
चिनियाँ अभियुक्तले उब्जाएको प्रश्न : नेपाली बैंकका एटीएम कति सुरक्षित ?
एटीएमको सिरियल नम्बर खिचेर ह्याकिङ सम्भव छ ?
personराजेश भण्डारी exploreकाठमाडौं access_timeचैत ३०, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । चीनबाटै साँचो बोकेर नेपाली बैंकको एटीएम बुथ खोल्ने क्रममा पक्राउ परेका चिनियाँ अभियुक्त यतिबेला काठमाडौंको प्रहरी हिरासतमा छन् । चीनबाटै साँचो लिएर काठमाडौं आएका यी अपराधीको हर्कतले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ– नेपाली बैंकका एटीएम बुथहरु कत्तिको सुरक्षित छन् ?
आखिर यी चिनियाँ अभियुक्तले एटीएम खोलेर सिरियल नम्बरको तस्वीर लिनुको कारण के हो ? महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंह मेशिनको सिरियल नम्बर खिचेर चिनियाँले लुटको पूर्वतयारी गरेको हुन सक्ने बताउँछन् । तर, सूचना प्रविधिका जानकारहरु चाहिँ सिरियल नम्बर पत्ता लगाएका आधारमा एटीएमबाट पैसा लुट्न सम्भव नहुने दाबी गर्छन् ।
चीनबाटै एटीएमको साँचो लिएर आएका थिए ‘ह्याकर’
उनका अनुसार सिरियल नम्बरबाट एटीएमको सिस्टममा प्रवेश गर्न सकिँदैन । तर, नेपालमा कुन जेनेरेशनको मेशिन प्रयोग भएको छ भन्नेचाहिँ सिरियल नम्बरबाट थाहा हुन्छ । ‘मेशिनमा लागेको सिस्टम ह्याकरले विश्लेषण गर्न खोजेको हुनसक्छ’ अर्का एकजना आईटीका जानकारले रातोपाटीसँग भने, ‘सिरियल नम्बरबाट सिस्टमभित्र पहुँच हुँदैन, सिस्टमभित्रको सफ्टवेयरमा एक्सेस नपाउँदासम्म पैसा झिक्न सम्भव चाहिँ छैन ।’
यदि, त्यसो भए चिनियाँले किन खिचे त एटिएमको सिरियल नम्बर ? महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता (एसपी) रमेशकुमार बस्नेत भन्छन्, ‘हाम्रो अनुसन्धान सिरियल नम्बर किन खिचे भन्नेमै केन्द्रित छ ।’